Dhameystirka - Delta Injineeriyada Biljamka
Kaydso qaybta "Dhamaadka"
Qeybta goynta madaxa qoorta
Qeybtaan jarista qoorta oo leh 1 madax qoorta dhalooyinka lakabyo badan leh. Waxay hubisaa qoorta fidsan, oo qumman iyada oo aan wax raad ah ka dhigayn. Qoorta marwalba meel go'an Si buuxda gacanta loo qabtay
Published in qarameedka
Labaatan mataano madaxa qodaxinta madaxa
Cutubkan jarista qoorta oo leh 2 madax ayaa qoorta dhalada ah oo leh lakabyo badan. Waxay hubisaa qoorta fidsan, oo qumman iyada oo aan wax raad ah laga dhigayn. Qoorta marwalba meel go'an Howl si buuxda loo xakameeyay
Qeybtaan la jeexjeexayaa waxay qodaysaa godadka sare ee durduryada durduryada L-ring (foosto).
Waxay ka fogaataa daadinta, maxaa yeelay qodista qoditaanka kuma jiraan! Sidookale, malahan qashin qashin-caag ah.
Waxaa loo isticmaali karaa marka lagu daro xaruntayada tayada leh ee QC060.
Published in Riixista